Yini inqubo yokwenza ngezifiso ibhokisi lakho lesipho
Ukupakishwa kwelebuli kwangasese kuba yisigcawu esivamile kulezi zinsuku, kusuka enkampanini enkulu kuya kwibhizinisi elincane, bonke bafuna ukuzakhela igama lenkampani ngokufakwa kwalo. Njengoba ukupakisha kuyindlela elula, eshibhile futhi esheshayo yokusabalalisa inhloso. Namuhla, njengeminyaka eyi-10 yokuhlangenwe nakho kwephepha p ...
Uma ukupakisha kwakho kungaboliseka kalula noma kubusheleleke emoyeni
I-Eco-friendly manje iba umkhuba, abantu abaningi ngokwengeziwe bayayikhathalela usuku nosuku, njengoba sibhekene nokuphakamisa izinhlekelele ezibangelwa ukubhujiswa kwemvelo yithi uqobo. Kithina, njengomkhiqizi webhokisi lokupakisha, kuvame ukubuzwa, ukuthi ibhokisi lakho liyabola yini? Okokuqala, ake sithole ukuthi yini i-biodegrada ...
Ungalakha Kanjani Ibhokisi Elihehayo
Ukupakisha kukhona njengokuvikela umkhiqizo wangaphakathi, kepha, ngokuthuthuka komnotho womhlaba, ukupakisha kufanele kungeze inani elengeziwe. Ukugqama esimweni sanamuhla sabathengi, kufanele ufinyelele ku- "wow factor", okwenza ukwakheka kokupakisha kubaluleke kakhulu. Kepha ungaklama kanjani ...